म कानूनको विद्यार्थी होइन, अन्याय चाहिँ गर्दिनः मुना अधिकारी - Dainik Nepal
मुना अधिकारी, उपमेयर, गोदावरी नगरपालिका, ललितपुर २०७५ कार्तिक २० गते ९:४२
मुना अधिकारी, उपमेयर, गोदावरी नगरपालिका, ललितपुर
ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकामा नेपाली कांग्रेसले मेयर र उपमेयरमा विजयी हासिल गरेको छ । वडाध्यक्ष र सदस्यहरूमा पनि कांग्रेसले धेरै स्थानमा जितेको छ । पर्यटकीय हिसावले गोदावरी नगरपालिकाको बेलाबेला चर्चा हुन्छ । ललितपुरको दक्षिणी भेगमा पर्ने गोदावरीकी उपमेयर मुना अधिकारीसँग हाम्रा सहकर्मी विमल योगीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
न्याय समितिको संयोजक हुनुहुन्छ मुद्धाहरू कसरी व्यवस्थापन गर्नु हुन्छ ?
मुद्धाको प्रकृति हेर्छौं । शुरुवाती दिनमा जस्तो खालका मुद्धा पनि आउँथे । अहिले त्यस्तो छैन । हामीलाई कानूनले दिएको अधिकार र परिधिभित्र रहेर मुद्धा लिन्छौैं । नयाँ कानूनले हामीलाई देवयानी मुद्धा मात्रै हेर्ने अधिकार दिएको छ । आन्तरिक रुपमा पनि नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूबीच परामर्श गरेरै अगाडि बढ्ने गरेको छु ।
विशेष गरेर कस्ता प्रकारका मुद्धाहरू आउँछन् धेरै ?
धेरै जसो जग्गाको विवाद नै आउँछन् । फाटुट रुपमा सम्बन्ध विच्छेदका कुरा पनि आएका छन् । मिल्ने मुद्धालाई दुबै पक्षबीच छलफल गराएर मिलाउने प्रयास गर्छौं । मिलने भने मुद्धाको फाइल जिल्ला अदालतमा पठाइदिन्छौँ । कुटपिटका मुद्धा हामीले हेर्न मिल्दैन ।
गत साल ७६ वटा मुद्धाहरू दर्ता भएका थिए । यसपालि ३८ मुद्धा दर्ता भएका छन् । गतसाल ४७ वटा मुद्धामा मेलमिलाप गराएका थियौँ । गतसाल सम्बन्ध विच्छेदका मुद्धा पनि हेरियो । मेलमिलाप गर्न सकिएन । जिल्ला अदालत पठायौँ ।
नयाँ कानून आएपछि न्याय सम्पादनमा केही समस्या भएको छ कि छैन ?
छैन । नबुझेको वा नजानेको कुरा विज्ञताहासिल गरेका व्यक्तिहरूसँग सोध्छौँ । कसरी जाने भनेर आन्तरिक तयार गर्छौं । नयाँ कानूनले शुरुवाती दिनमा समस्या भएपनि अहिले केही समस्या भएको छैन । हाम्रै नगरपालिकाभित्र कानून जानेका र पढेका तथा व्यावहारिक ज्ञान भएका व्यक्तिहरू धेरै हुनुहुन्छ । बेलाबेला भेट हुन्छ । भेट भएका बेला कानून र न्यायका बारेमा अनौपचारिक कुराकानी हुन्छन् । हामी जनप्रतिनिधि हौँ । आफ्नै गाउँ टोलमा नै जाने बुझेका व्यक्तिहरूसँग परामर्श गर्दा धेरै कुराको ज्ञान हुन्छ ।
तपाईलाई कानूनको ज्ञान कत्तिको छ ?
म कानूनको विद्यार्थी होइन । तर, अध्ययन गर्न थालेको छु । अन्याय हुन दिन्न । शुरुमा पनि भनिसके जाने बुझेकाहरूसँग बेलाबेला परामर्श गरिरहन्छु । शुरुमा नभए पनि अहिले त हुन थाल्यो । कानूनका किताव बढ्न थालेकी छु । जनप्रतिनिधि भएपछि सबै कुराको जानकारी राख्दा मलाई नै राम्रो हुन्छ ।
न्याय सम्पादन गर्दा कसरी काम गर्नु हुन्छ ?
कानूनका बारेमा मैले सबै कुरा जानेको छैन । कानून, न्याय सम्पादनमा सहयोग होस् भनेर कानूनी सल्लाहकार राखेको छु । हाम्रै गोदावरी नगरपालिका वडा नं. ३ को वडाध्यक्ष वकिल हुनुहुन्छ । उहाँसँग पनि कुराकानी हुन्छ । न्याय समितिमा वडाध्यक्ष आफै सदस्य हुनुहुन्छ । मेयरले पनि सहयोग गर्नु हुन्छ । हप्ताभरि दर्ता भएका मुद्धाहरूमा शुक्रबारका दिन हामीले आन्तरिक रुपमा छलफल गर्छौं । त्यसपछि सरोकारवालाहरूलाई सम्पर्क गरेर आइतबार बोलाएर छलफल गर्छौं ।
कानूनका बारेमा तालिम लिनुभएको छ कि छैन ? सरकारले तपाईहरूलाई कानून र न्याय सम्पादनमा प्रशिक्षण दिओस भन्ने चाहना कि छैन ?
तालिम त दिनुपर्ने हो । स्थानीय सरकार सञ्चालनमा सहयोग होस् भनेर एक पटक बोलाएर संघीय मामिला मन्त्रालयले सामान्य तालिम दिएको थियो । त्यसले मात्रै पुग्दैन । केही गैर सरकार संस्थाले पनि तालिम र छलफल गर्ने गरेका छन् । केन्द्र सरकारले नै देशभरिका उपमेयरहरूलाई कानून र मुद्धाका विषयमा अलिक राम्रो प्रशिक्षण दिँदा राम्रो हुन्थ्यो ।
महिला जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो जिम्मेवारी अनुसारको कार्यसम्पादन गर्न सकेनन् भन्ने गुनासाहरू आएका छन् । तपाईप्रति त्यस्तो गुनासा आएको छ कि छैन ?
जिम्मेवारी अनुसारको काम गरेको छु । कार्यसम्पादन भनेर केलाई भन्नु खोज्नु भएको हो ? न्याय समितिको कुरा गर्नु हुन्छ भने अहिलेसम्म दर्ता भएका मुद्धालाई सकेसम्म यही हामीले मेलमिलाप गराउने प्रयास गरेका छौँ । नसकेका विषयलाई जिल्ला अदालत पठाइदिएका छौँ । विकासको कुरा गर्नु भएको हो भने अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजनाहरू बनाएर काम शुरु भएका छन् । छिट्टै परिणाम हेर्न पाइनेछ । मैले नसक्ने कामहरू मेयरले गर्नु हुन्छ । मैले मेयर समक्ष पठाउने गरेकी छु ।
केही ठाउँमा महिला जनप्रतिनिधि भएकै कारण होच्याउने गरेको समाचार आएका छन् । तपाईलाई त्यस्तो व्यवहारको सामना गर्नु परेको छ कि छैन ?
अहिलेसम्म त्यस्तो कुराको सामना गर्नु परेको छैन । जनताको काम गर्न मभित्र पनि इच्छा शक्ति छ । हुनुपर्छ । यदि काम गरेन भने कुराकाट्ने त भइहाल्छन् । फेरि हामी जनताबाट निर्वाचित भएर आएको व्यक्ति । आफ्नै गाउँ टोलमा त्यो समस्या छैन । सबैबाट सहयोग मिलेको छ । बरु हामीलाई कर्मचारी अभाव भएको छ । डेढ वर्ष भैसक्यो । केन्द्रबाट कर्मचारी आएका छैनन् । काम गर्न समस्या भएको छ ।
स्थानीय तहले कर बढाएको भनेर धेरै आलोचना भएको छ । तपाईहरूको गोदावरी नगरपालिकामा के गर्नु भएको छ नि ?
कर बढाएका छैनौँ । करको दायर फराकिलो बनाएका छौँ । जनतालाई समस्या पर्ने गरेर कुनै पनि कर बढ्दैन । बढाउँदा सरसल्लाह गरेरै निर्णय गर्ने हो । अरुले जस्तो गोदावरी नगरपालिकाले जनतालाई मर्का पर्ने गरेर केही गरेको छैन । कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यालयबाट पनि करका बारेमा चासो र चिन्ता हुने गरेको छ । कांग्रेसको नीति भनेको कर मात्रै बढाउने होइन जनतालाई कसरी विकासमा सहभागी गराउने त्यसतर्फ ध्यान दिन भनिएको छ । मेयर र मैले कांग्रेसले दिएको निर्देशनलाई पनि ध्यान दिने गरेका छौँ ।
तपाई नेपाली कांग्रेसको नेतृ पनि हो पार्टीको कार्यक्रममा कत्तिको जानु हुन्छ ?
पार्टीको कार्यक्रममा पनि जानुपर्छ । कांग्रेसबाट टिकट पाएर विजयी भएको हुँ । कांग्रेसलाई पनि समय दिनुपर्छ । संगठन बनाउनु पर्छ । जनताको काम पनि गर्नुपर्छ । दुबैतिर समय मिलाएर काम गर्दै आएको छु ।
कार्यालयमा कत्तिको बस्नु हुन्छ ? कि पार्टीको काममा मात्रै हिँड्नु हुन्छ ?
समय मिलाउनु पर्छ । जनताको काम भयो भने जति बेला पनि समय दिनुपर्छ । पार्टीको कार्यक्रम भयो भने पनि जानुपर्छ । हामी मेयर र उपमेयर दुबैजना नेपाली कांग्रेसबाट टिकट लिएर विजयी भएका कारण सकेसम्म एकजनाले कार्यालय छाड्दैनौँ ।